‘खिजिदेम्वालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउँछौं’ - Purwanchal Daily
खिजिदेम्वा गाउँपालिका ओखलढुङ्गा जिल्ला सदरमुकामदेखि करिब १६ कोस टाढा उत्तर–पश्चिममा अवस्थित गाउँपालिका हो । यही गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर रोका आफू आगामी १० वर्षमा गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने लक्ष्यसाथ लागीपरिरहनु भएको छ । बुबा अम्बरबहादुर रोका र आमा अमृतमाया रोकाका चार छोराछोरी मध्येका माहिलो सन्तानका रूपमा २०१९ साउन १२ गते जन्मनुभएका उहाँ शिक्षण पेसासँगै राजनीतिमा होमिनु भएको छ ।
आफ्नै घर छेउमा रहेको चण्डेश्वरी मावि रगनीबाट प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा लिएका उनी एसएलसी परीक्षापछि प्राइभेटबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभएका उहाँले त्रिचन्द्र कलेजबाट अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा बीए काठमाडौं शिक्षा क्याम्पसबाट बीएड अनि अर्थशास्त्रमा पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट एमएसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ ।
दुःखका साथ अध्ययन र शिक्षण पेशा सँगसँगै गर्नुभएको उहाँ चण्डेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक समेत बन्नुभएको थियो । २०७४ बैशाख २३ गते शिक्षण पेशाबाट अलग भई स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्वा गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा निर्वाचित बेदबहादुर रोकासँग गरेको कुराकानी ः
तपाईंले गाउपालिकाको अध्यक्ष भएर आएको साढे तीन वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
– वास्तवमा सिकाइ र गराइमा नै बित्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा यसको विपरीत भएका कारण केन्द्र र प्रदेश सरकार गठनको पर्खाइमा धेरै समय बित्यो । तत्पश्चात् केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने कानून र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको पर्खाइ आजका दिनसम्म पनि पर्खाइमै रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा ‘धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो’ भने झैँ स्थानीय सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवासुविधा समयमा नपाएको अवगालको मार स्थानीय तहले खेप्नुपरेको छ । तर, पनि अधिकार प्रत्यायोजन, कानून निर्माण र कर्मचारी समायोजन अनि एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीको रूपान्तरणको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा जे–जति अधिकार तथा स्रोत र साधन प्राप्त भएको छ केन्द्र र प्रदेश सरकारको नीति निर्देशनमा, त्यसको उपयोग एवम् कार्यान्वयन हाम्रो गाउँपालिकामा सन्तोषजनक नै भएको अनुभव गरेको छु ।
निश्चय नै स्थानीय सरकारबाट जनताले जे–जति आशा गरेका थिए, त्यो पाउन नसकेकै हो । तर, पनि जे जति पाउन सकिएको छ, त्यो विगतको एकात्मक शासन प्रणालीको भन्दा निश्चय नै बढी छ । शुरुको वर्ष केन्द्र र प्रदेश सरकारको चुनाव सरकार गठन अनि ऐन कानून निर्माण प्रक्रियामा हुने र भएको ढिलाइ सेवाप्रदायक सरकारी कार्यलयहरूको स्थानीय तहमा गरिने स्थानान्तरण र स्थापनामा भएको ढिलाइ एवम् अलमल, कर्मचारी समायोजनका कार्यले केही असहज भए पनि अहिले जनताको काम गर्न सहज नै रहेको छ । आफूहरु जनगुनासो र जनताको काम गर्न आएको जनताको गोठालो भएका कारण निर्वाचित समयदेखि हालसम्म जनता कै गोठालो भएर काम गरि रहेको छु ।
यो अवधिमा तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू के–के हुन् ?
– यी सबै मैले मात्र नभएर हामीले गरेका काम हुन् । हामी खिजिदेम्वा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले यस अवधिमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्माण गर्न सक्ने र हामीलाई तत्काल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनको निर्माण गर्नुका अतिरिक्त ग्रामीण सडक विस्तार तथा मर्मत गर्ने कार्य गर्दै वडा र गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माण, गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम जोड्ने पाँचवठा सडक, विभिन्न टोल बस्तीमा तुलनात्मक रूपमा पायक पर्ने गरी सडक पु¥याउने, गाउँपालिकादेखि जिल्ला सदरमुकाम कच्ची सडकले जोड्ने काम गरेका छौँ । कृषिमा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई पर्यावरणीय कृषि प्रणाली तथा आधुनिक व्यावसायिक खेतीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यअन्तर्गत माटो परीक्षण तथा आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरण वितरण र प्रयोगको शुरुवात गर्ने लगायतका विभिन्न कार्य गरिएको छ ।
हाम्रो गाउँपालिकाको भूबनोट, हावापानी, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई आधार मानेर हामीले मूलतः सडक सुविधाको विकास, कृषि क्षेत्रको विकास, पशुपन्छी पालन, जडिबुटी र वन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, जल उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन, यी नौवटा क्षेत्रको समयोचित विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गाउँपालिकाका तथा जिल्ला कै अग्लो भू–भाग देम्वा डाँडासम्म पुग्नका लागि विधि पूर्वाधारहरु तयारी गरिरहेका छौं ।
चुनावका बेला जनतासग गरेका प्रतिबद्धता के–कति पूरा गर्न सफल हुनुभएको छ ?
– चुनावका बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताभन्दा धेरै काम भइसकेका छन् । चुनावमा त्यस्ता गर्नै नसकिने कुनै प्रतिबद्धता गरिएको थिएन । जे होस्, हामी सफल भए जस्तो लागिरहेको छ । यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थकर्मी आवश्यकता अनुसार थप गर्नुका साथै औषधि आपूर्ति नियमित गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच सहज गराउन आवश्यकता हेरी स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरिएको छ भने गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन एउटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्य भएको छ । भइरहेको प्रसुति केन्द्रलाई अरू थप सुधार गरिएको छ । गाउँपालिकामा पाँच शय्याको अस्पताल भवन निर्माणको विगतको प्रस्ताव स्वीकृत भए अनुरुप संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार अस्पताल निर्माणको कार्य भइरहेको छ । सञ्चारतर्फ गाउँपालिका केन्द्र तथा गाउँपालिकामा भएका शैक्षिक सस्थाहरुमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । टेलिफोन टावर निर्माण गर्ने कार्य भइसकेको छ ।
विद्युत् पावर हाउसको मर्मतसम्भार र काठका पोलहरूको सट्टा फलामे पोलको व्यवस्था गर्ने कार्य गरिएको छ । खानेपानीतर्फ राष्ट्रियस्तरका ठूला–ठूला खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य शुरु भइसकेको छ भने विद्यमान खानेपानी मर्मत तथा खानेपानी आपूर्ति सेवा विस्तार गर्ने कार्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यको पहल लगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि, सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम गरिएको छ । साथै गाउँपालिकामा ‘क’ वर्गको एक बैंक मेघा बैंक नेपाल लिमिटेडको स्थापना भई कार्य प्रारम्भ भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय सूचारु गराई नागरिकता वितरण गर्ने कार्य भएको छ । एवम् रीतले हामीलाई स्थानीय तहमा कानूनद्वारा अधिकार प्रदान गरिदिएसम्मका हाम्रा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका कामहरू गर्नुका साथै प्राप्त स्रोत र साधनको उचित उपयोग गर्ने काम गरिएको छ । यद्यपि, केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई समयमै दिनुपर्ने निकासको ढिलाइका कारण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा कठिनाई एवम् ढिलाइ हुन गई आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
जिल्लाकै उच्च क्षेत्र पर्यटकीय स्थल देम्वाको विकासका लागि गाउपालिकाले बेवास्ता गरेको आरोप छ नि ?
– पर्यटकको केन्द्रबिन्दु नै देम्वा डाँडो भएको कारण देम्वालाई बेवास्ता गरेको भन्ने कुरा आउँदैन । राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन भएको थोलेदेम्वा महोत्सवले निरन्तरता नपाए पनि यसको विकासका लागि गाउँपालिका सधैँ अग्रसर रहेको छ । महोत्सवले निरन्तरता नपाएका कारण सबैलाई त्यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । तर, गाउँपालिकाले पर्यटकीय स्थानलाई बेवास्ता भने गरेको छैन ।
गाउँपालिकामै पर्यटन बोर्ड बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । पर्यटनका लागि गाउँपालिकाले एउटा गुरुयोजना बनएर लाग्नेछ । तत्कालका लागि पनि गाउँपालिकाले पर्यटकीय स्थान देम्वामा ट्रष्ट निर्माण गरिरहेको र देम्वा पर्यटन विकासका लागि बजेट विनियोजन समेत भएको छ । सिंगो स्थानीय तहले देम्वाकोे जगेर्ना गरी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य बनाएको छ । देम्वालाई केन्द्रबिन्दु बनाई लिखुको पोकली झरना हुँदै गौरीवन देम्वा पिके पर्यटन पदमार्गको योजनाका साथ गाउँपालिका लागीपरेको छ ।
अहिले कोभिड–१९ को अवस्थामा जनस्वास्थ्यको लागि गाउपालिकाको कस्तो भूमिका रह्यो ?
– हो, वास्तवमा अहिले विश्व नै कोभिड–१९ को महामारीमा रहेको अवस्थामा आफ्नो गाउँपालिका अछुतो हुने कुरा रहेन । यस अवधिमा हामीले पहिलो चरणमा सर्वसाधरणलाई जनचेतनासहित साबुनपानीको प्रयोग गरौं भन्ने विषयमा सूसुचित ग¥यौं । त्यसपछि गाउँपालिकाले अन्य स्थानमा रहेर गाउँ फर्कन नसकेका सर्वसाधरणहरुलाई गाउँ फर्कार्यौं । यसका लागि देशका अन्य स्थानमा रहेका सर्वसाधरणहरुलाई काठमाडौंसम्म आउनको लागि अनुरोध पश्चात आफूहरुले काठमाडौंदेखि गाउँसम्म ल्याउन सफल भयौं ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाका सर्वसाधरणको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जिल्ला मै पहिलो पटक स्थानीय सरकारको पहलमा हामीले ल्याव सञ्चालन तथा स्वास्थ्य परीक्षणको कामलाई निरन्तरता दिन सफल भयौं । हरेक नागरिकहरु कोभिडबाट जोगिन पर्छ भनेर सेनीटाईजर, साबुन वितरण गरेका थियौं भने कोभिडको समयमा रोजगारी गुमाएका परिवारलाई हामीले राहत उपलब्ध गराएका थियौं । जनताले स्वास्थ्य परीक्षणबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर आशंकित मानिसहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र समुदायस्तरमा कोभिड नफैलियोस् भनेर अहिले पनि सतर्कता अपनाइरहेका छौं ।
समृद्ध गाउपालिका बनाउन के योजनाका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ ?
– खिजिदेम्वा गाउँपालिकालाई एउटा समृद्ध गाउँपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । जल, जंगल, जडिबुटी र पर्यटन नै समृद्ध खिजिदेम्वाको आधार हो । यसकै कारण हामीले खिजिदेम्वालाई समृद्ध बनाउँछौँ भनेर लागीपरेका छौँ । केन्द्र सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न गराउन कस्तो नीति लिन्छ ? कस्तो निकास र विकास दिन्छ ? त्यसमा पनि भरपर्छ, तर हाम्रो गाउँपालिकाको भू–बनोट, हावापानी, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई आधार मानेर हामीले मूलतः सडक सुविधाको विकास, कृषि क्षेत्रको विकास, पशुपन्छी पालन, जडिबुटी र वन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, जल उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन, यी नौ वटा क्षेत्रको समयोचित विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
यसका लागि हामीले केही खास–खास क्षेत्रको छनोट गरी क्रमशः गुरुयोजना तयार गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ । निश्चय नै यी लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्दै गर्दा यो कार्यकालमा कम्तीमा पनि जग, एउटा आधार मात्र खडा भए पनि यसको शुरुवात मात्र भए पनि आगामी १० वर्षभित्र खिजिदेम्वा गाउँपालिका एउटा समृद्ध गाउँपालिका बन्नेछ ।
प्रस्तुति : मनोज भट्टराई
Previous articleफुटबाट जोगाउन संयुक्त प्रस्ताव
Next articleझापामा पठनपाठनको तयारी: बाह्रदशी गाउँपालिकामा आजबाट विद्यालय सञ्चालनमा